मत्ती २२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२२ येशूले फेरि दृष्टान्तहरू चलाएर तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: २ “स्वर्गको राज्य एउटा राजाजस्तो हो, जसले आफ्नो छोराको विवाह-भोज तयार गरे। ३ अनि तिनले विवाह-भोजका निम्तालुहरूलाई बोलाउन आफ्ना दासहरू पठाए तर तिनीहरू आउन मानेनन्‌। ४ तिनले फेरि यसो भनेर अरू दासहरू पठाए: ‘निम्तालुहरूलाई यसो भन: “हेर, मैले दिवा-भोज तयार पारेको छु, मेरा गोरु र मोटा-मोटा पशुहरू काट्न लगाइसकेको छु अनि सबै थोक तयार भइसकेका छन्‌। विवाह-भोजमा आउनुहोस्।” ’ ५ तर तिनीहरूले वास्तै गरेनन्‌; एक जना आफ्नो खेततिर गयो, अर्कोचाहिं व्यापारतिर लाग्यो ६ अनि बाँकी अरूले तिनका दासहरूलाई पक्रेर दुर्व्यवहार गरे र तिनीहरूलाई मारे। ७ “तब राजा क्रुद्ध भए अनि आफ्नो सेना पठाएर ती हत्याराहरूलाई नाश गरे र तिनीहरूको सहर जलाइदिए। ८ त्यसपछि तिनले आफ्ना दासहरूलाई भने: ‘विवाह-भोज त तयार छ तर निम्तालुहरू योग्य भएनन्‌। ९ त्यसैले सहरका मूल बाटोहरूमा जाओ र ज-जसलाई भेट्टाउँछौ, सबैलाई विवाह-भोजको निम्तो देओ।’ १० त्यसैले ती दासहरू बाटोतिर गए अनि के दुष्ट, के सज्जन, भेटेजति सबैलाई जम्मा गरे र विवाह-घर पाहुनाहरूले भरियो। ११ “जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न आए, तब तिनले एक जना मानिसलाई विवाहमा जाँदा लगाउनुपर्ने पोसाक नलगाई आएको देखे। १२ त्यसैले तिनले उसलाई सोधे: ‘मित्र, विवाहमा लगाउनुपर्ने पोसाक नलगाई भित्र छिर्ने आँट तिमीले कसरी गऱ्यौ?’ उसले जवाफै दिन सकेन। १३ त्यसपछि राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भने: ‘त्यसको हातखुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिर अन्धकारमा फालिदेओ, जहाँ रोदन अनि वेदनाको चीत्कार हुनेछ।’ १४ “किनकि निम्तालुहरू त धेरै छन्‌ तर चुनिएकाहरू भने थोरै हुन्छन्‌।” १५ त्यसपछि फरिसीहरू आफ्नो बाटो लागे र उहाँले बोल्नुभएकै कुरामा उहाँलाई कसरी फसाउने भनी आपसमा सल्लाह गरे। १६ त्यसैले तिनीहरूले हेरोदवादीहरूसित आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँकहाँ पठाए र यसो भन्न लगाए: “गुरुज्यू, हामीलाई थाह छ, तपाईं सत्यवादी हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मार्ग ठीकसित सिकाउनुहुन्छ अनि तपाईं कसैको बहकाउमा पर्नुहुन्न, किनकि तपाईं मानिसहरूको मुख हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्न। १७ त्यसकारण तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, हामीलाई भन्नुहोस्: सम्राट्लाई* कर * तिर्नु उचित हो कि होइन?” १८ तर तिनीहरूको दुष्ट विचार थाह पाएर येशूले भन्नुभयो: “ए कपटीहरू, तिमीहरू किन मेरो परीक्षा गर्छौ? १९ कर तिर्ने सिक्का मलाई देखाओ।” तिनीहरूले उहाँकहाँ एक दिनारको* सिक्का ल्याए। २० अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “यसमा कसको चित्र र नाम छ?” २१ तिनीहरूले जवाफ दिए: “सम्राट्को।” तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जे-जे सम्राट्का हुन्‌, सम्राट्लाई र जे-जे परमेश्वरका हुन्‌, परमेश्वरलाई देओ।” २२ यो सुनेर तिनीहरू जिल्ल परे अनि उहाँलाई छोडेर गए। २३ सदुकीहरू, जो मरेकाहरू पुनर्जीवित* हुँदैनन्‌ भन्छन्‌, तिनीहरू पनि त्यही दिन उहाँकहाँ आए र सोधे: २४ “गुरुज्यू, ‘यदि कुनै मानिस निःसन्तान मऱ्यो भने उसको भाइले आफ्नो दाइकी पत्नीसित विवाह गरेर दाइको निम्ति सन्तान जन्माउनुपर्छ’ भनेर मोशाले भनेका छन्‌। २५ हामीसँग सात जना दाजुभाइ थिए अनि जेठोले विवाह गऱ्यो र कुनै सन्तान नजन्माई मऱ्यो। त्यसैले भाइले दाइकी पत्नीसित विवाह गऱ्यो। २६ यही क्रम माइलो, साइँलो हुँदै सातौं भाइसम्म चल्यो। २७ अन्तमा त्यो स्त्री पनि मरी। २८ त्यसोभए, तिनीहरू पुनर्जीवित हुँदा त्यो स्त्री ती सात जना दाजुभाइमध्ये कसकी पत्नी हुनेछे? किनकि त्यो सबैकी पत्नी भइसकेकी थिई।” २९ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “तिमीहरूले गलत बुझिरहेका छौ, किनकि तिमीहरूलाई न धर्मशास्त्र थाह छ न त परमेश्वरको शक्ति नै; ३० किनकि पुनर्जीवित भएपछि न पुरुषले न स्त्रीले नै विवाह गर्नेछन्‌ तर तिनीहरू स्वर्गदूतहरूजस्तै हुनेछन्‌। ३१ मरेकाहरूले पुनर्जीवन पाउने विषयमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको छ, के तिमीहरूले पढेका छैनौ: ३२ ‘म अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ’? उहाँ मरेकाहरूको होइन, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ।” ३३ उहाँको यस्तो शिक्षा सुनेर भीड छक्क पऱ्यो। ३४ उहाँले सदुकीहरूको मुख टालिदिनुभयो भनेर जब फरिसीहरूले सुने, तब तिनीहरू हुल बाँधेर उहाँकहाँ आए। ३५ तिनीहरूमध्ये एक जना, जो मोशाको व्यवस्थामा पोख्त थियो, उसले उहाँको परीक्षा गर्ने विचारले यस्तो सोध्यो: ३६ “गुरुज्यू, व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?” ३७ उहाँले उसलाई जवाफ दिनुभयो: “ ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा ज्यानले र आफ्नो सारा दिमागले प्रेम गर्नू।’ ३८ यो नै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आज्ञा हो। ३९ दोस्रोचाहिं यही हो: ‘तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।’ ४० यिनै दुई आज्ञामा सारा व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूको शिक्षा अडिएको छ।” ४१ फरिसीहरू भेला भएको बेला येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: ४२ “ख्रीष्टको विषयमा तिमीहरूको के धारणा छ? ऊ कसको छोरा हो?” तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए: “दाऊदको।” ४३ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “त्यसोभए, पवित्र शक्तिको प्रेरणा पाएर दाऊदले कसरी उनलाई ‘प्रभु’ भनेर सम्बोधन गर्दै यसो भन्न सके त, ४४ ‘यहोवाले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो: “मैले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो पाउमुनि नराखुन्जेल मेरो दाहिने हाततिर बस” ’? ४५ यदि दाऊदले उनलाई ‘प्रभु’ भनी सम्बोधन गर्छन्‌ भने ऊ कसरी तिनको छोरा हुन्छ?” ४६ अनि कसैले उहाँलाई एक शब्द जवाफ फर्काउन सकेन र त्यस दिनदेखि उसो कसैले उहाँलाई अरू प्रश्न सोध्ने आँट पनि गरेन।
^ मत्ती २२:१७ * ग्रीकमा “सिजर।”
^ मत्ती २२:१७ * मत्ती १७:२५ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २२:१९ * दिनार ३.८५ ग्राम तौल भएको चाँदीको रोमी सिक्का हो।
^ मत्ती २२:२३ * वा, “पुनरुत्थान।”